I-Koralle OG (2 Pers - 15m2)
Ilali yeeholide ikwindawo engaphandle kwespa kunye nedolophu yewayini yaseBad Sulza, eThuringia. Iphakathi kunxantathu wedolophu yaseyunivesithi yaseJena, idolophu yakudala yaseWeimar kunye nedolophu enkulu yaseNaumburg. Le ndlu yeeholide enamagumbi ali-9 inika amathuba amahle okuphumla. Yimizuzu nje eyi-10 ngeenyawo ukusuka eToskana Spa kunye nemizuzu emi-3 ukusuka kwiofisi yabakhenkethi. Kufuphi nendlu uya kufumana inani lezibonelelo ezibandakanya indawo yokuthenga, indawo yokuhlamba impahla / yokuayina, amatheko e-grill e-Thüringer Bratwurst; ithala leencwadi elincinci labantu bayo yonke iminyaka, kunye nenkonzo yokudlala kunye nebhayisekile yokurenta. Ngomrhumo omncinci ungasebenzisa inkomfa / igumbi lesidlo elinokuhlalisa ukuya kwiindwendwe ezingama-80. Ikhitshi elahlukileyo, elisandul' ukumiselwa (elinomatshini wokuhlamba izitya, isitovu sombane, izixhobo ezahlukeneyo, isitya, izinto zokuthambisa kunye nezixhobo zeglasi) kunye neepaviyoni zasehlotyeni ezineendawo zokosa inyama zimema ukuba ukonwabele ukupheka. Kwiindwendwe ezincinci kukho indawo yendalo ebiyelweyo eyi-13,000m2 eyenza indawo efanelekileyo yokudlala. Iingokuhlwa ezinde zasehlotyeni zibonelela ngolungiselelo olugqibeleleyo lokonwabela iintlobo ngeentlobo zewayini zendlu. Kukho izibhedlele ezi-2 ezikufutshane nendlu.
Indawo engatshayiyo "iKoralle" ibekwe kumgangatho wokuqala wendlu yeeholide zaseMaritime. Le ndlu ihonjiswe kakuhle inommandla omalunga ne-15m2 kwaye inokwamkela abantu aba-2. Igumbi lokuhlala linendawo yokutyela, ibhedi ephindwe kabini (140x200), iwadilophu, iTV kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo (elinezitya, ikofu, itoaster, iketile, i-egg cooker, imicrowave kunye nefriji/ifriji). Igumbi lokuhlambela linebhafu yeshawa kunye nendlu yangasese. Ilinen yokulala ifakwe kwixabiso kwaye iya kutshintshwa kanye. Isidlo sakusasa sinokubhukishwa kwalapho. Izilwanyana zasekhaya azivumelekanga. I-WLAN iyafumaneka xa iceliwe. Eli khaya lingenamsi yindawo yokuhlala eneenkwenkwezi ezi-4.
I-Bad Sulza yidolophu encinane ekwi-Ilm [umlambo] eThuringia. Yaziwa njengedolophu ye-spa kunye newayini kwisithili seWeimarer Land kwimpuma yeThuringia. Yaziwa kakhulu ngempilo yayo kunye nezibonelelo zempilo. I-Bad Sulza ilele phakathi kwentliziyo eluhlaza yaseThuringia, ebizwa ngokuba “yiTuscany yaseMpuma” ngenxa yehlathi layo elishinyeneyo (ihlathi laseThuringian). I-Weimarer Land yonwabela isithethe esityebileyo seminyaka ephantse ibe li-1000 kwimveliso yewayini. Kufuphi ne-Bad Sulza uya kufumana isiqalo se-Saale-Unstrut "indlela yewayini" ehamba nawe ukuya kweyona ngingqi yewayini isemantla eYurophu (Kösen, Freyburg and Nebra). Qiniseka ukuba uyonwabele iglasi yewayini elungileyo endleleni! Iindidi ezityebileyo zenkcubeko, indalo kunye nembonakalo yomhlaba itsala abakhenkethi abaninzi kulo mmandla unyaka nonyaka. Ukuphumla kunye nokuphila kakuhle, kukho iToskana Spa. KwiTempile yeLiquid Sound unokuqubha kunye nokukhanya kunye nomculo. Iziza ezifana ne-Dornburger Schlösser (iinqaba ezi-3) ezinezitiya zerozi, i-Naumburger Cathedral, iinqaba zase-Rudelsburg kunye ne-Saaleck, kunye nokuhlaliswa kwe-Eckartsburg luhambo olufutshane nje ngemoto okanye ngololiwe. Le ikwayindawo efanelekileyo yokuhamba, ukukhwela ibhayisekile kunye nohambo lwesikhephe. Ngamahlathi ayo amakhulu, iinduli eziqengqelekayo, iintlambo ezijikajikayo, izidiliya kunye namanzi aphilisayo iThuringia inokuyonwatyelwa ngalo lonke ixesha lonyaka. Ewe kukho inani lemitsalane kunye neembono ekungafanelanga ukuba ziphoswe ngokuqinisekileyo kuquka i-Apolida (15 km); iWasserburg Clock Museum eKapellendorf (20km); izixeko zaseJena (21km), Weimar (30km) naseNaumburg (23km); inqaba yaseAuerstedt kunye nemyuziyam yayo; iAuerworld Palace (“iWillow Palace”) (iikhilomitha ezi-4); Inqaba yaseKromsdorf (25km) kunye neBad Kösen (10km) kunye nomgodi wayo wetyuwa.
Ubungakanani: 15 m2.
Izixhobo: Umatshini wokuhlamba, iketile, ibhedi ephindwe kabini, TV, Terrace, oven, cooker, microwave, toaster, ikofu maker, isikhenkcezisi, uqhagamshelo lwe-intanethi, ukufudumeza, Izitulo eziphezulu, isofa, ibhedi eyodwa, igadi, igrill yeBBQ, ilinen yebhedi, ibhedi yasimahla. ngesicelo, Isomisi, igumbi lokuzilolonga, i-Spa, iiRenti zeBhayisekile, indawo yokuPaka simahla, ukuRha ihashe, Akukho magumbi okutshayela/amaziko, akukho zilwanyana zasekhaya ezivunyelweyo, indawo yokudlala, ifriji, indawo yokupaka yasimahla negaraji;
Igumbi lokuhlambela, Igumbi lokulala, Ikhitshi